RW Rooble ‘Rogane’ oo maanta hor tagaya Golaha Shacabka | KEYDMEDIA ONLINE
RW Rooble ‘Rogane’ oo maanta hor tagaya Golaha Shacabka
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Rooble Rogane ayaa maanta la filaya inuu hor tago Golaha Shacabka Baarlamaanka Fadaraalka Soomaaliya, si uu ula wadaago waxyaabihii u qabsoomay ku dhawaad 110-ka maalmood ee uu joogay xaafiiska.
MUQDISHO, Soomaaliya - RW, Rooble Rogane tan iyo markii Xukuumaddiisu codka kalsoonida ka heshay Baarlamaanka bishii October 2020, waxuu ku jiray aamusnaan, isagoo guud ahaan awooddii xaafiiska Ra’isul Wasaaraha hoos geeyay xaafiisyada Fahad iyo Farmaajo.
Rooble ayaa isku dayay inuu si sharci darro ah Baarlamaanaka ku hor tago 8 February 2021, hayeeshee buuq ka abuurmay kulankiisa kadib, guddoonka Golaha Shacabka ayaa dib u dhigay, maantana ballan u qabatay.
Qeyb ka mid ah Xildhibanada iyo siyaasiyiinta Mucaaradka ah ayaa sheegay in Rooble Rogane uu wado qorshe uu Farmaajo u soo dhiibay oo ah muddo kororsi, masuuliyiin ka tirsan Golaha Shacbka ayaana muujiyay cabasho ka dhan ah ciidanka dhar cadda ah ee laga soo buuxiyay guriga Baarlamaanka 8 February 2021 oo ah maalintii uu baaqday kulankii Rooble.
Xildhibaanada mucaaradka ah ee ka tirsanaa mudanayaasha labada aqal ee Baarlamanka ayaa shalay ku dhawaaqay Kutlad loogu magac daray Badbaado Qaran taas oo ay sheegeen in ay uga hor tagayaan xad gudub kasta oo Baarlamaanka ka dhan ah, taas oo suura gal ka dhigeysa in haddii uu maanta Rogane dalbado muddo kordhin uu Golohu madal buuq iyo gacan ka hadal isku badalo.